Deni oo Iclaamiyey shir wadatashi oo looga arrinsanayo aayaha Puntland iyo sidii mowqif… – Hagaag.com
Deni oo Iclaamiyey shir wadatashi oo looga arrinsanayo aayaha Puntland iyo sidii mowqif…
Posted on 7 Febraayo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa galabta magaalada Bosaso kaga dhawaaqay shir wadatashi oo looga arrinsanayo aayaha Puntland iyo sidii ay mowqif midaysan uga qaadan lahayd dowladnimada Soomaaliya.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay shirkaas inuu Garowe ka qabsoomi doono 15-ka bisha saddexaad ee sanadkaan, ayna kasoo qeyb gali doonaan golayaasha Puntland, wakiilada Puntland u matala dowladda federalka Soomaaliya iyo cid walba oo talo ku leh masiirka Puntland.
Madaxweyne Deni, waxa uu sheegay inay heshiis adag ka geli doonaan qadiyada dowladnimada Soomaaliya oo aysan cidina ku xadgudbi Karin. Wuxuu tilmaamay in quus laga taagan yahay rajada dowlanimada Soomaaliya.
“Waxaa nagu qasbay inaan maanta hadalno, aamuskeenii ayaa loo qaatay inaan raalli ku nahay sida ay wax u socdaan, marka Puntland inay caddeyso in aanay raalli ka ahayn waxa socda ayaan u muujinaynaa ummadda Soomaaliyeed,’ ayuu yiri Deni.
” Waxaan la leeyahay shahaadada qaranka wax ka jiraa ma jiraan. Wax qaran uu bixiyo oo la wada leeyahay waa Passport-ka. Puntland iyadaa mas’uul ka ah masiirka ardaydeeda, waligeed iyadoo dowlad Soomaaliyeed aanay jirin ayay ardayda Puntland waxbarasho u aadi jireen dalka dibadiisa, iyadoo aan lagu xirin shahaado qaran.” ayuu yiri madaxweyne Deni.